News - Analysis nke ga-eme n'ọdịnihu mmepe na-emekarị nke China agụmakwụkwọ ụlọ ọrụ
1. Isi nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ mmepe
Erylọ ọrụ ụrọ bụ ngwa ọrụ dịgasị iche iche ndị mmadụ na-eji eme omenala dị ka mmụta, ọfịs, na ndụ ụlọ. Site na mmepe na-aga n’ihu nke akụ na ụba na teknụzụ, a na-emelitekwa otu ụdị ụlọ agụmakwụkwọ mgbe niile. Enwere ike kewaa ụlọ ọrụ nke oge a na ngwaọrụ edere, ụlọ ọrụ ụmụ akwụkwọ, enwere ọtụtụ ngalaba dị ka ụlọ ọrụ ọfịs, ihe enyemaka nkuzi, agụmakwụkwọ na ngwa egwuregwu.
Pencils nke subdivision ụlọ ọrụ nke sọọsọ, na mgbe ọ bụla ogide ọnọdụ dị mkpa na office agụmakwụkwọ. Ndị na-azụ ahịa ya bụ ụmụ akwụkwọ. A mụrụ ụlọ ọrụ pensụl nke China pensụl na 1930s. Na 1932, na Kowloon, Hong Kong, ndị China tinyere ego ma gbanwee ụlọ ọrụ pensụl nke onye ọchụnta ego Britain na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ pensụl a ma ama. Na 1933, Beijing China Pencil Company na Shanghai Huawen Pencil Factory pụtara otu otu ọzọ. Wu Gengmei, onye laghachiri na Japan na 1935, guzobere ụlọ ọrụ pensụl pensụl a na-emepụta nke ọma na Shanghai nke nwere ike imepụta ndị isi, pensụl pensụl, ndị na-ede akwụkwọ na nhazi nke onwe ya. Harlọ ọrụ Harbin China Standard Pencil Company, ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze, malitere na Septemba 1949. companylọ ọrụ ahụ ka bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị ukwuu na ụlọ ọrụ pensụl mba.
Pensụl ọdịnala na-eji osisi eme ihe dị ka gbọmgbọm na graphite dị ka isi okwu, nke chọrọ nnukwu osisi iji rie. Nnukwu osisi ịda osisi na-emebi echiche nke nchebe gburugburu ebe obibi. Iji gboo mkpa nke mmepe ahịa, na 1969, Teijin Company mepụtara usoro maka imepụta pensụl plastik. N'oge ọkọchị nke 1973, Berol Company nke United States na Sailorpen Company nke Japan zụrụ usoro a n'otu oge. Sailorpen bidoro imepụta pensụl plastik na Eprel 1977. N'oge ahụ, ejiri pensịl eserese mee grapat nke pensụl plastik, agwakọta ya na resin paint. A na-eji ndị na-ewepụta ihe atọ agwakọta ihe atọ iji mepụta pensụl, nke mere ka usoro pensịl mepụta dị mfe. E jiri ya tụnyere pensụl osisi ndị e ji osisi rụọ, a na-eji pensụl niile a na-eji plastic ekpe, nke Sailorpen na-eji ire ụtọ arụ ọrụ, ọ gaghịkwa ede akwụkwọ na aka. Ọnụahịa ahụ yiri nke pensụl nkịtị. Pensụl plastik aghọwo ihe a ma ama. N’afọ 1993, otu onye na-emepụta ngwa ọrụ ụlọ ọrụ nke Jamanị mepụtara ngwa ọrụ na-aga n’ihu maka pensụl plastik, nke nwere ike iwepụta pensụl 7,000 n’otu awa. Mkpịsị aka ahụ bụ 7.5 mm na dayameta na 169 mm n'ogologo. Pensụl plastik a chọrọ ọnụahịa mmepụta dị ala karịa pensụl osisi, enwere ike ịme ya n'ụdị dị iche iche, dị ka kanye, zigzag, ụdị obi, wdg.
Mgbe ogologo oge mmepe na mkpokọta, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na Europe, America, Japan na mba ndị ọzọ ejirila ọkwá kachasị elu na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ụwa. Agbanyeghị, n'ihi ihe ndị dị ka ụgwọ ọrụ na nchekwa gburugburu ebe obibi, njikọ ndị na-emepụta ngwa ngwa nke ngwa ngwa ejirila nwayọ gaa China, India, na India. Vietnam na mba ndị ọzọ dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na-eji nwayọọ nwayọọ na-aga na ọkwa nke ọrụ ọrụ, imepụta ngwaahịa, yana nyocha ihe na mmepe.
2. Omume mmepe nke ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ nke ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ
1) Ikike agụmakwụkwọ na-eche na ị ga-aha ma ahaziri ya
A na-eji ngwa eji ede ede ihe n'ọmụmụ ihe kwa ụbọchị yana ọrụ. Site na mmụba nke ego ndị bi na mmelite nke echiche ndị na-eri ihe, ndị ahịa na-enwekarị ọchịchọ ịzụta ngwaahịa nwere arụmọrụ dị mma maka ogo ngwaahịa, ogo imepụta, akara njedebe, na aha njirimara. Ngwaahịa akara. Akara bu mkpokọta nke njirimara, njirimara, arụmọrụ, yana ogo ojiji nke ngwaahịa ụlọ ọrụ. Ọ na-egosipụta ụdị ụlọ ọrụ, mmụọ na aha ọma nke ụlọ ọrụ ahụ, ọ ga-emetụtakwa omume ịzụrụ ndị ahịa n'ọtụtụ ebe.
2) sọọsọ ọnụ ahịa ọdụ na-abụkarị agbụ
Na ike nke ụdị na-emekarị nke ihe ọ stationụ stationụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-aga n'ihu na-akwalite usoro nke ọrụ ọrụ, ụlọ ahịa ndị na-ere akwụkwọ nkịtị na-egosipụtakwa omume nke itinye aka na franchising. Lọ ahịa ọfịs ndị nkịtị na-abụkarị ụzọ dị mkpa maka ire ahịa ụlọ, mana n'ihi mgbochi mgbochi dị ala na asọmpi ọnụahịa na-asọ oyi, ọtụtụ ụlọ ahịa ụlọ ngwa ahịa nwere enweghị uru na-adịghị ike, arụmọrụ na-adịghị agbanwe agbanwe yana ọbụna wepu ha n'ihi enweghị njikwa na ezughi oke ego. Ọrụ Franchising brand stationery na-enye aka iji meziwanye ụlọ ahịa ahụ, na-eme ka ọnọdụ dị mma nke ngwaahịa a na-ere, na ịkwalite ikike iguzogide ihe egwu ruo n'ókè ụfọdụ. Ya mere, na-adịbeghị anya, na-emekarị nke sọọsọ ahịa ọnụ chaining dị ịrịba ama.
3) Stationlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na-etinye uche na iche iche na njedebe dị elu
Ka ọ dị ugbu a, ụmụ akwụkwọ na ndị ọrụ ọfịs na-eto eto na-ahọrọ ihe e kere eke, nke ahaziri iche, na nke ejiji. Stationlọ ọrụ dị otú ahụ na-enwekarị ihe okike pụrụ iche, akwụkwọ ọgụgụ na ụdị ejiji, yana agba agba, nke nwere ike ibute ihe ndị chọrọ ọrụ yana meziwanye ahụmịhe ndị ọrụ. N'otu oge, na ngalaba nke eserese, ego, imewe na onyinye, ọkachamara elu-ọgwụgwụ sọọsọ n'ji iche iche na-aba ụba, na elu-ọgwụgwụ sọọsọ nwere ike ọkachamara, elu àgwà na elu uru nke nta nke nta-aghọ a ọhụrụ na-enwu gbaa ntụpọ iji kwalite oriri ụlọ. Maka nyocha ụlọ ọrụ dị mkpa, biko rụtụ aka na akụkọ nyocha ụlọ ọrụ ụlọ ahịa nke ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ nke China Report Hall wepụtara.